ECB cancel Zimbabwe's 2009 cricket tour and seek replacement for England - Telegraph
ECB cancel Zimbabwe's 2009 cricket tour and seek replacement for England
Concern: ECB chief Giles Clarke
12:39PM BST 25 Jun 2008
Zimababwe's tour of England next year has been cancelled after the ECB suspended bilateral arrangements with Cricket Zimbabwe.
The ECB officially severed ties after the Government "concluded that it would not be right to allow the proposed tour (to England) by Zimbabwe Cricket in 2009 to take place".
Nick Hoult and Derek Pringle: Government ready to ban Zimbabwe
Having receiving a letter from Andy Burnham, minister for Culture, Media and Sport, outlining the governmental position, the ECB released a statement which confirming their suspended arrangements with the African country, following the lead of South Africa earlier this week.
Stanford's $20m showdown
Gordon Brown said that the Government was taking steps to ensure the Zimbabwe tour does not go ahead.
One option would be to ask Bangladesh to bring their planned 2010 series forward a year while Sri Lanka and Pakistan would be other possible opponents.
Earlier today, the Conservative Party also called on the Prime Minister to ban all Zimbabwean cricket teams from competing in England.
"If we are not going to recognise the regime, why are we welcoming a team that is run by Mugabe's henchmen and will only be used to legitimise the evil he is perpetrating?
"Banning them from coming by refusing to issue visas would send a clear message to Mugabe - the Zimbabwe cricket team is not welcome here whilst his criminal regime hangs on to power."